Zvokuita kana iTunes ikasaziva iPhone yako | IPhone nhau
Zvaunofanira kuita kana iTunes ikasaziva iPhone yako
Mukufamba kwedu kwese nemaappleti eApple, kunyanya avo, seni, vanoshandisa Windows nemakomputa emhando dzakasiyana zuva nezuva. Chii chinoitika kana iTunes ikasaona yedu iPhone?Zvakanaka, tinosvotwa zvakanyanya, nekuti zvinowanzoitika kana iri nguva isiriyo, apo patinoda kudzoreredza kana kuendesa mafaera mahombe chero chikonzero. Nhasi tiri kuzokupa mashoma matipi kuti iwe ugone kugadzirisa mamiriro aya pasina kudhonza bvudzi mumusoro wako, usazvidya moyo, zvese zvine mhinduro.
1 Tangazve komputa yako ne iPhone
2 iOS uye iTunes nguva dzose kusvika parizvino
3 Edza kumwe kubatana
4 Chenesa Mheni pane yako iPhone
5 Dzosera nzvimbo uye zvakavanzika data
6 Zvichiri kusashanda? Enda kuApple
Tangazve komputa yako ne iPhone
Zvinoita sezviri pachena, asi kune vanhu vazhinji vasingadaro, kazhinji reboot inokusevha yakawanda matambudziko, chero chinhu chingaitika, faira iri mu iPhone cache inogadzira kunetsana, komputa inogadziridza iyo isingatenderi iwe kubatanidza chero chinhu ... etc. Kuti utangezve yako iPhone iwe unongofanirwa kudzvanya bhatani reMagetsi uye bhatani reKumba panguva imwe chete kusvikira logo yeApple yaonekwa.
iOS uye iTunes nguva dzose kusvika parizvino
Vamwe vane kutya kwekuvandudzwa, asi zvichipesana nezvinofungwa nevakawanda, izvi zvinotangwa kugadzirisa matambudziko apfuura, uye rimwe rematambudziko aya anogona kuve kubatana kweiyo iPhone neTunes semuenzaniso, nekuda kwechikonzero ichocho, Tinokurudzira kuti iwe ugare wakachengeta yako iPhone mune yazvino vhezheni (kana kwete, zvinoenderana nezvaunoda, hachisi chirongwa chekusiya Jailbreak futi), asi pamusoro pezvose zvine yazvino vhezheni yeTunes, sezvo iri iyo inobvumidza kana kwete kubatana neiyo iPhone.
Para gadziridza iTunes:
Windows: Rubatsiro> Yepamberi menyu> Tarisa uone
Mac: Bhatani reTunes> Tarisa uone kuti zvagadziriswa here
Kugadziridza yako iPhone, semazuva ese muZvirongwa> General> Software Kwidziridzo.
Edza kumwe kubatana
Izvi zvinowanzoitika nekuda kwezera rekubatana, tsvina kana zvimwe zvidiki diki, saka tinokurudzira kuti uedze imwe yemachiteshi e USB pakombuta yako kana imwe tambo yepamutemo yaunayo. SKana iyo tambo yaunoshandisa isiri MFi kana yepamutemo, ipapo iwe une kiyi yedambudziko. Rangarira kugara uchishandisa tambo dzepakutanga kana dzeMFi, dzinogara dzichisimbisa kushanda kwakachengeteka uye kwakachengeteka, aya anobva kuAmazon Basics semuenzaniso anodhura.
Chenesa Mheni pane yako iPhone
Iwe ungazoshamisika kuti chii chinogona kuunganapo ipapo, neyakareruka wemeno, hunyoro uye moyo murefu iwe unogona kubvisa yakakwana donje neint kuita chirafu. Zviite zvinyoro nyoro uye nokungwarira, ikuisa tip uye nokushivirira kubvisa fluff iyo yasara mukati. Ini ndakarasa kuverenga maPhones asina kubhadharisa kuti "ndagadzirisa" zvakadaro kubva kune vamwe shamwari neshamwari.
Dzosera nzvimbo uye zvakavanzika data
Kazhinji imwe yedata iyi inogona kuumba kumwe kunetsana kusingabvumidze kubatana, semuenzaniso kana isu takapa "usavimba" patakabatanidza iyo iPhone kune ino komputa kekutanga. Usatombo kunetseka, izvi zvisirizvo zvisina kugadziriswa zvine mhinduro kana tikaramba matanho anotevera:
Bhura pasi pasi kune iyo reset submenu, yekupedzisira
Sarudza "gadzirisazve nzvimbo uye zvakavanzika data"
Iye zvino unogona kudzoreredza yako iPhone uye ichakubvunza iwe zvakare kana iwe uchivimba iyi komputa kana kwete, panguva ino iwe unofanirwa kuve wakangwarira kubaya pa "Vimba" nemazvo.
Zvichiri kusashanda? Enda kuApple
Kana chishandiso chako chiri mukati memakore maviri ekutanga ekutenga, muEurope tinokuyeuchidza kuti ine garandi, iine mamwe mabuts, gore rekutanga rewarandi ichafukidzwa neApple's technical service, yechipiri ichabhadharwa neanoshanda foni. watengesa chiteshi kana chero mumwe murevereri. Kana Apple inogona kuzvirumbidza nechimwe chinhu, iko kwehunyanzvi sevhisi, saka kana iwe uine Apple Chitoro padhuze, ungave kana usina garandi, enda ikoko, pachave paine Genius yakagadzirira kukubatsira iwe uye pamwe kugadzirisa dambudziko nekureruka izvo iwe haugone kufungidzira.
Uye zvakare, kana dambudziko iri riri nekuda kwetsvina uye ukasashinga kuichenesa, muApple Chitoro havazeze kukubatsira mune maminetsi (zvakaitika kwandiri), uyezve, tora mukana tenderera uye uone izvo zvazvino zvishandiso kubva kune izvo Apple zvainazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Zvaunofanira kuita kana iTunes ikasaziva iPhone yako
Luis J. Lebrón akadaro
Icho chinongedzo hachiendi ...
Pindura kuna Luis J. Lebrón
Juan Jesu Bouzas Grau akadaro
"404 haina kuwanikwa"
Pindura Juan Jesu Bouzas Grau
Jorge Luis Fernandez weRoma akadaro
Ndakarega kushandisa iTunes rinopfuura gore rapfuura, chinhu choga chainondishandira kudzorera. Iyo mimhanzi inodzikisirwa naSpotfy uyezve nezvimwe zvese kubva kuiyo iPhone.
Pindura kuna Jorge Luis Fernandez Roman
Seba Wolf akadaro
Pindura Seba Lobo
Pili Gonzalez Lacámara akadaro
Ini ndinongoshandisa iTunes, kuwiriranisa mapikicha emifananidzo uye kuisa yemahara mimhanzi hapana chimwe chinhu
Pindura Pili Gonzalez Lacámara
Kenneth alvarez akadaro
Pindura kuna Kenneth Alvarez
Josue Patiño C akadaro
Pindura Josue Patiño C
Mifananidzo yeGoogle? Zvirinani fungisisa kaviri usati waishandisa
"Geometry Hondo 3: Makimo" izvozvi zvave kuwanikwa paApp Store. Ongorora.